Ingabe inqubekela phambili iyimpumputhe?
Yini esingayenza ukuqondisa intuthuko endaweni efanele?
Kunenkinga eyisisekelo yezimakethe: zikhawulelwe yi-psyche yomuntu. Kusho ukuthini? Ngokuyinhloko ukuthi ikhono lentengo lempahla ethile, liboshwe yikhono elihlangene lokuqonda imiphumela yesikhathi eside. Inkinga ukuthi ngoba siyizilwane, ezikhathini eziningi sizwa ingcindezi yezinto kuphela duzane nathi kokubili esikhaleni nesikhathi. Uma sithatha lokhu njengokuyiqiniso ngaso sonke isikhathi singabhala izibonelo ezisobala kakhulu lapho le nkambiso iletha ukwehluleka:
Kuyaqondakala ukuthi izinto zifana kanjani [ ukunciphisa okulinganiselwe ] ingahle ibukeke njengesixazululo esisebenzayo ngezikhathi zobunzima, kepha icatshangelwe isikhathi eside kunesikhathi sesikhathi sempilo yomuntu, izinto zingabukeka zehlukile, lapho izinkukhu zifike ekhaya zizohlala , ukwehla kwamandla emali, futhi izingxenye ezibuthakathaka zomphakathi zihamba phambili kakhulu. Inkinga ukuthi lapho umphumela uzwakala ( kungani le nto iphindwe kabili ngentengo? ), i-catalyst (aka enkulu yemjovo yemali) isidlulise izindaba, nabantu, bacwila ezindabeni zabo zansuku zonke (Angikwazi ukufika sekwephuzile emsebenzini noma ngizoxoshwa, angikwazi ukuxoshwa, ikakhulukazi manje, ukuthi izikweletu nezintela sekungavunyelwe kakhulu ), ayiphenduli njengoba kufanele ; Izimbangela nemiphumela ihlukanisiwe ( yisiphi isikhathi seminyaka esidale le nkinga? 1980? Ngo-1990? 2000? ), ukukhomba inkinga iba yinkinga yokuxhumanisa enganqobeki, njengoba okuseduze kakhulu izindaba eziseduze nesikhathi sesikhala somphakathi zihamba phambili ( sidinga ukulungisa ukungasebenzi manje, umnotho ngokuhamba kwesikhathi ...).
Lapho ngithenga ifosholo, nginenani engqondweni, lokho kwenziwa ngezingxenye ezibhala ifosholo. Isibambo nethiphu. Amanani ajwayele ukufaka izindleko zokukhipha Kusetshenziswe ezindlekweni zezinto zokusetshenziswa, khona-ke siyathola izindleko zokwakha, izindleko zokugcina, izindleko zokuhamba, izindleko zesevisi . Sika amanani entengo lapha, (singayinaki intela). Akuvamile izindleko zokulahla, izindleko zokungcola ... intengo in.
Ngabe okuthile kuguqula kanjani umphakathi? Kukhona imikhiqizo efana ama-smartphones okushintsha unomphela ukwakheka komphakathi nezizukulwane ezizayo, kepha ukufaka izindleko ezinjalo hhayi lutho . Onke amathuluzi esiwenzayo ashintsha indlela yethu yokuphila, futhi ngokuyisisekelo indlela ethuthukayo eyithathayo ekufuneni kwayo ukwenza ngcono impilo yethu.
Kunomkhuba ovamile lapha, izinto okunzima ukuzibala zishiywa zingenaziqinisekiso. Lokhu kuphambana nesisho okuthile kungcono kungelutho . Ukushiya izinto zingafakwanga kucishe kufane nokuphika ukuthi zikhona, lapho silandela le patheni isikhathi eside, sigcina sikhohlwe, kuze kube inkinga inkulu kakhulu ukuthi singayinaki ( irowu ekhaya lethu yakha isimo esinezintaba!). Ukubeka amanani entengo, ngisho ngokungalungile kungcono kunokulayishwa kabusha, ngoba sidinga ukukhunjuzwa njalo ukuthi izinkinga zikhona.
 noma umane uwagcwalise, ukuze ubalekele ukungabi bikho okukhona njalo kokuphila komuntu